နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: ကိုယ့်/သူ့ Computer Hard Disk ကို Format လွယ်လွယ်ချချင်ပါသလား ?
ကိုယ့်/သူ့ Computer Hard Disk ကို Format လွယ်လွယ်ချချင်ပါသလား ?
တစ်ခုတော့ သတိပေးပါရစေ Format လုပ်စရာမလိုပဲ မဖွင့်မိပါစေနဲ့ တာဝန်မယူကြောင်းပါ ။
ဒီနည်းကို မတင်ပေးကောင်းမှန်းသိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခုတစ်လောတော်တော်ကိုတွေ့နေရတယ် ။ ဆောပ်ဝဲလ်ကို သုံးမိပြီး ခံစားရတဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေပါ ။ ဘာဆောပ်ဝဲလ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြပေတော့........ ။ ကျွန်တော်လည်း မပြောလိုပါဘူး ။ မြင်သမျှ တွေ့သမျှအားလုံး သဘောကျဆိုသလို နာမည်လေးကို ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ဒေါင်းပြီး Run လိုက်တော့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော..... ။ တစ်ခုတော့ ပြောချင်တယ် ။ ဆောပ်ဝဲလ်တွေ ယုံကြည်လို့ရမှ သုံးသင့်ပါတယ်ဗျာ ။ ကျွန်ပျူတာကို မြန်စေတယ်... ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် .. နာမည်ကောင်းတွေနဲ့ ဖုံးထားတတ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်နည်းက အကောင်းဘက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ Computer ကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Notepad ဖြင့် Format ချနိုင်ပါတယ် ။ အဆိုးဘက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဖိုင်ကို လုပ်ပြီး သူများဆီပို့ သူများက နိပ်မိရင် Computer Hard Disk က Format ချနေလိမ့်မယ် ။ ကိုယ့်ကြည့်ချင်တဲ့ ဘက်ကနေကြည့်ပါ ။
စမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး Run Box ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ။ Window + R နိပ်ပြီးဖွင့်နိုင်ပါသည် ။
ပြီးရင်တက်လာတဲ့ ဒီစာသာလေးတွေကို ကော်ပီပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ ။
အဲဒီဂဏန်းတွေပါ ။ ပြီးရင် Save မယ် ။ .exe နဲ့ Save ရမယ် ။ ဥပမာ Format pc.exe ပေါ့ဗျာ ။ သူများဆီကို ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နာမည်ပြောင်းဖို့တော့လိုမယ်လေ :) ။ ကျွန်တော်ရေးတာတွေကို နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Video ဖြင့် ကြည့်နိုင်ကြောင်းပါ ။
ကျွန်တော် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နောက်ထပ်စာတပုဒ်ရေးလည်း မလောက်မငှဖြစ်နေတာမို့ ဒီကြားထဲမှာ သိပ်ထည့်ထားလိုက်မယ် :)
Source: December Mg Mg
Posted by P Kyaw Swa at 1:59 AM